मण्डपको २ फेरा लगाएपछि बिबाह र’द्ध : कारण थाहा पाउँदा सबै च’कित ! – Life Nepali
मण्डपको २ फेरा लगाएपछि बिबाह र’द्ध : कारण थाहा पाउँदा सबै च’कित !
10 months ago Life Nepali
काठमाडौ । के हुन्छ जब बिबाहको सबै कर्म सकिएर माण्डपलाई फेरा लगाउने बेलामा बिबाह र’द्ध भएको घोषणा हुँदा । अनि के होला जब कर्म सकिन लागेपछि थाहा हुन्छ की उनीहरु त दाजु बहिनी हुन् । समय–समयमा यस्ता घ’टनापनि हुँदा रहेछन् । बिबाह सकिनै लाग्दा युवतीले बेहुलालाई दाई भन्नुपर्ने र युवकले बेहुलीलाई बहिनी भनेर पो सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो । यस्ता अ’नौठा घ’टना सायद विश्वमा कमै हुन्छन् । भएको के भने विवाहको समयमा ७ फेरा लिनुपर्ने हुनुपर्छ तर २ फेरा लिएपछि केटीले दाई भनेपछि त’नाब भएको हो ।
भारतको उत्तर प्रदेशको ग्राम ओडिलामा एक अ’नौठो घ’टना भएको हो । विवाहको बेला सात फेरा लिने बेलामा २ फेरामा उनिहरुको गोत्र एउटै भएको भन्दै दिदीभाई भनेर विवाह बिचमा रो|किएपछि सबै अ’च्चममा परेका हुन् । तर केटा पक्षले दुलाहलाई गोडामा र जन्तीलाई जीपमा राखेर नल्याएको भन्दै केटीपक्षले विवाह र’द्ध ग|र्दिएको हो भन्ने आ’रोपपनि छ ।
कोलारसको रामगढ़ चक्क निवासी परमा आदिवासीका छोरा खुशालीरामको विवाह ईसागढ़का ओडिला निवासी मोहर सिंहकी छोरी सबीनासँग गएको १७ जूनमा तय गरिएको थियो । दुलाह पक्ष ३० जना जन्तीसहित ट्याक्टर र ट्रलीमार्फत ओडिला पुगेका थिए । जबकी केटीपक्षले जन्तीलाई जीपमा वा गाडीमा र केटालाई घोडामा राखेर ल्यान अ’नुरोध गरेका थिए ।
जब फेरा चलिरहेको थियो तब केटीपक्षले भन्यो, ‘हामीलाई जानकारी भयो कि केटापक्ष र केटीका मामाको गोत्र एउटै पर्न गएको देखिएको छ ।’ यति भनेपछि विवाह रो’कियो अनि दिइएको दाईजोलाई ट्याक्टर र ट्रलीबाट निकाल्ने काम पनि भयो । केटीपक्षको यस्तो ह’र्कत पछि केटा पक्ष जन्तीसहित प्रहरी चौकी पुगेको छ । घ’टनाका बारेमा थप आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ ।
Previous लकडाउनमा महिलालाई आयो यस्तो अ’नौठो प्रस्ताव !
Next सामाजिक स’ञ्जालमा भाइरल बनेको यस तस्बिरको यस्तो छ वास्ताविकता :
उपचार खर्च तिर्न नसक्ने कोभिडका बिरामीको सम्पुर्ण खर्चको जिम्मेवारी अब हाम्रो हुनेछः रबि लामिछाने
11 mins ago Life Nepali